Madaxweyne Farmaajo oo maanta furaya kalfadhiga 5-aad ee Golaha Shacabka – Walaal24 Newss
Waxaa maanta lagu wadaa in uu sirasmi ah uu u furmo kalfadhigii Shanaad ee mudanayaasha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Jamhuuriyadda Soomaaliya, si ay u dardargeliyaan howlaha horyaala kalfadhigan.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa lafilayaa in uu sirasmi ah uu u furo kalfadhiga 5-aad ee Golaha shacabka,kadib markii ay ka soo laabteen xildhibaanadu fasax ay kujireen kaasi oo dhamaaday.
Qaban qaabo ku aadan qabsoomidda munaasabadda furitaanka ayaa haatan ka socota xarunta dugsiga tababarka booliska ee Janaraal Kaahiye ee magaalada Muqdisho,sida uu ku soo waramayo wariyaha warbaahinta Qaranka ee Golaha Shacabk Ibraahim Guudle Isxaaq oo goobtaasi ku sugan.
Golaha Shacabka ayaa waxaa horyaala ajandayaal dhowr ah,kuwaasi oo muhiim u ah dalka,waxaana lafilayaa in ay dardargeliyaan meel marinta shuruucda hortaala kalfadhigan maanta furmaya.
Wasiirka Armaha Dibada oo ka qeybgalay shir looga hadlayo muran goboleedka Saxaraha
Dowladda Eritrea oo dib u furatay Safaradeedii ay ku lahayd Addis ababa